ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 30.1 အဖေ့ရဲ. ကာတွန်းစာ
ဆရာသော်တာဆွေကို သတိရပါ့။ ဆရာနဗနကတော့ ပိုပွင့်လင်းပါတယ်။ ရေးပြီးသမျှအားလုံးကို စုပြီး စာအုပ်ထုတ်ပါဗျို့  ။ သေချာနေတာ တခုကတော့ ရန်ကုန်က ဗွီဒီယို ဒါရိုက်တာတွေက ခင်ဗျားရဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေကို အလုအယက် ခိုးချကြတော့မယ် ဆိုတာပဲ။ ဇာတ်လမ်းတင် မကဘဲ ရီရတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေကိုပါ မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ရင် ကောင်းပါ့ဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့ ကျနော်လဲ မသိဘူး။ :)
ဟုတ်ပါတယ် အစ်ကို။ ကိုမောင်ကြီး ပြောသလိုပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် စာအုပ်ထုတ်စေချင်တယ်။
ဒီအဖေကြောင့်ပဲ ဒီသားလေးဖြစ်တည်လာတယ်ထင်ပါ့။ တယ်တော်တဲ့ အဖေပဲ။
အဖေသွေးပါတယ်ထင်တယ်… အဖေကလဲ ပြောချင်တာကို ထိထိမိမိလေး နားထဲဝင်သွားအောင် လုပ်တတ်ပါပေတယ်….
စိတ်ထဲ ကျော်ရဲအောင်ကို မြင်မိပါတယ်။
မိန်းမက ပိန်ပိန်သေးသေးဆိုတော့ ခိုင်သင်းကြည်ပေါ့။
သဘောတူတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြီးသာ ရိုက်ပါ။